Rent: Umahluko phakathi kwediphozithi kunye nediphozithi? | Ezezimali
Rent: Umahluko phakathi kwediphozithi kunye nediphozithi?
UJoseph kwakhona | | Iimveliso zezemali
ESpain ukuqeshiswa kweeflethi inyuke nge-19% kule minyaka mihlanu idlulileyo, apho ukonyuka okuphawuleka kakhulu kwenzekile kwezi ngqungquthela: 47,5% e-Barcelona kunye ne-38% kwisixeko saseMadrid, ngokwengxelo yeFotocasa. Apho kuye kwacaca ukuba kukho amaphondo amahlanu — iBaleares, iLas Palmas, iSalamanca, iBarcelona neMadrid—, athe afikelela kwizinga eliphezulu kwimbali ngeli xesha. Kuzo zombini iimeko, ukonyuka kwexabiso kuphezulu kakhulu kune-10% ngonyaka.
Ngayiphi na imeko, xa umqeshi eza kutyikitya ikhontrakthi yerenti yendlu, kuya kufuneka azi kakuhle ukuba uza kusayina ntoni ngokuchaseneyo phakathi kwala maqela mabini. Into engasoloko isenzeka ngenxa yokuqonda okuncinci okukhoyo kubaqeshi malunga Umthetho woqeshiso lwedolophu (LAU). Apho kunyanzelekile ukuba wazi ukuba athini amalungelo akho, uxanduva olusekwe kwimigaqo ekhoyo ngoku elawula ulawulo lwentengiso kwindlu yaseSpain.
Enye yeemeko apho impikiswano inkulu khona kukwahlula eyona nto iyidiphozithi kunye nesiqinisekiso. Kungenxa yokuba, ayisiyiyo into efanayo nangona zininzi izinto ezingqinelanayo. Ziingcinga ezahlukileyo ekufuneka uyazi ukwahlulahlula Ngexesha lokumisela ngokusemthethweni ikhontrakthi yokurenta indlu. Ayothusi into yokuba inokubangela ukungangqinelani okukhulu phakathi komnini kunye nomqeshi ngokwakhe. Kungenxa yokuba sisixa esihanjiswa ngexesha elichanekileyo lokuqhuba ukuthengiswa kwezindlu, ngaphambi nje kokuba ungene uhlala kwinani lesibini lale nkqubo.
1 Ngaba idiphozithi kunye nebhondi ziyafana?
2 Idiphozithi kwirente
3 Imiqathango yokufumana kwakhona idiphozithi
4 Yintoni iidipozithi zokhuseleko?
5 Imbuyekezo yedipozithi
Ngaba idiphozithi kunye nebhondi ziyafana?
Ewe akunjalo ngaphandle kwenkolelo yabanye abasebenzisi abacinga ukuba ikwayimbono efanayo. Nangona into abavumelana ngayo kukuba isixa sabo sihlala sifana kakhulu, ngeentengiselwano eziphantse zilingane nesixa okanye ubuncinci umahluko omncinci. Ngayiphi na imeko, siza kuchaza ukuba ezi zinto zimbini ziqulathe ntoni. Ukuze ungabinangxaki xa kufuneka usayine ikhontrakthi yolu hlobo lomsebenzi ekhaya. Kuba ngemigaqo emitsha, akukho mathandabuzo ukuba uya kuba nokumangalisa, njengoko uza kubona ngezantsi.
Alithandabuzeki elokuba eyona micimbi iphambili abanayo abantu abatsha xa behlala kwipio yipio Umahluko phakathi kwediphozithi kunye nediphozithi. Akuyi kuba nzima kakhulu ukwahlula ukusuka ngoku. Ukuze ucace ngakumbi malunga nokuhlawula kwelinye iqela kwaye ngawaphi amalungelo kunye noxanduva olufumanayo kuyo yomibini le misebenzi. Ngokukodwa, emva kotshintsho olwenzekileyo kuMthetho wokuQeshisa ngeDolophu (LAU). Kwaye oko kuchaphazela imiba enxulumene nediphozithi kunye nesiqinisekiso kwinkqubo yokurenta indlu okanye enye indawo yokuhlala.
Lelona xesha lamkelekileyo kubasebenzisi kuba liqhelekile ukuba libuzwe xa ungena ukuhlala eflethini okanye kwigumbi. Ngale ndlela, kufuneka icaciswe ukuba umqeshi unyanzelekile ukuba ahambise kwelinye iqela isibophelelo esisemthethweni. Ewe, isixa esichazwe ngumthetho yirente yenyanga enye, eya kusiwa kumninikhaya. Kuya kucaciswa ukuba kude kube kungena imigaqo emitsha le ntlawulo ingabonisa iintlawulo ezininzi zenyanga. Lixabiso elisebenza njengesiqinisekiso ngokuchasene nokusilela okunokwenzeka kumqeshi. Kwakhona uzikhusele kuwo nawuphi na umonakalo onokubakho ekhaya.
Ukuba yonke into iqhubeka ngokwesiqhelo, le mali (idipozithi) iya kubuyiselwa kumqeshi kwiintsuku ezilandela ukuphelelwa kwesivumelwano. Ngenxa yantoni, umnini wendlu uya kujonga ukuba wonke umxholo uyafana nangexesha lokungena ukuze uphile. Uya kuba nefayile ye- ixesha elifikelela kwiintsuku ezili-15 zokubuya kwakho kwaye ukuba bekungekho ngale ndlela, kuya kufuneka ithathe intlawulo yemidla ehambelana nayo, njengoko iqokelelwa nguMthetho wokuQeshisa ngeeDolophu. Ngayiphi na imeko, ingumbono onganikezeli ngamathandabuzo amaninzi kubanini nakwabaqeshi.
Imiqathango yokufumana kwakhona idiphozithi
Ngayiphi na imeko, uthotho lweemeko kufuneka zenziwe ukuze lo msebenzi usebenze kakuhle kuwo omabini la macandelo enkqubo. Oku kubaluleke kakhulu ukunqanda izehlo ezithile ezinokuphazamisa le ntengiselwano ngexesha lokushiya indlu ngabaqeshi. Kwaye ke oku kulandelayo kukuveza ngezantsi:
Yazisa umnini ngexesha kunye nohlobo lwesigqibo sokushiya ipropathi.
Buyela ekhaya kwimo enye apho wadibana nayo okokuqala emva kokusayina ikhontrakthi
Ungabinamatyala okanye Iintlawulo ezisalindelekileyo ngerhafu yenyanga okanye kwimpahla ekuvunyelwene ngayo.
Ukuba konke oku kuzibophelela kuzalisekisiwe, akukho mathandabuzo okuba idipozithi iyakufunyanwa kwiintsuku nje ezimbalwa. Kuba yinto eqhelekileyo kwaye yenziwa phantse kuzo zonke iikhontrakthi. Nangona kunganyanzelekanga kwisigqibo sokuba umnini wepropathi yabucala uya kusityala. Ngale ndlela, kuya kufuneka unike ingqalelo ekhethekileyo kwinto echazwe kwisivumelwano. Kuba ungabandakanya igatya elichaza ukuba, ewe emva kweenyanga ezintandathu zokuqala, indlu ishiyiwe ngaphambi kokuba kufikelelwe kumhla wokugqibela wesivumelwano, banelungelo lokugcina indawo ehambelana nediphozithi. Yimeko ekhethekileyo, kodwa ihlala isenzeka rhoqo.
Yintoni iidipozithi zokhuseleko?
Nangona ifana kakhulu naleyo yangaphambili, ayifani. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kukho umahluko omkhulu ekufuneka uyazi ukusuka kula maxesha achanekileyo. Phantsi komthetho wangoku wokuQeshisa ngeDolophu (i-LAU), umninimzi unokucela idiphozithi yezi mpawu, njengesiqinisekiso esongezelelweyo, kubaqeshi bexesha elizayo. Injongo yayo kukuba zikhusele kwiziphene ezinokwenzeka kwiintlawulo zenyanga okanye ngaphambi kwengxaki endlwini. Ngayiphi na imeko, ayisiyonto iqhelekileyo kunale yangaphambili kwaye ayiqhelekanga ukuba yenziwe ibe semthethweni phakathi kwamaqela omabini.
Kule meko ngokubanzi, kubaluleke kakhulu ukuba wazi ukusuka kumzuzu wokuqala ukuba uhlawula ntoni kulo msebenzi. Oko kukuthi, ukuba yidiphozithi okanye ngokuchaseneyo sisiqinisekiso. Kuba kwimeko yokuqala sisixa ekufuneka siqeshiwe kumnini-mhlaba. Ayisiyondlela onokucinga ngayo ngentlawulo yenyanga, kodwa ngokuchaseneyo yi isixa ekuvunyelwene ngaso phakathi kwamaqela omabini. Ngenxa yokuba isixa esilingana neentlawulo ezimbini zenyanga zerhafu asinakugqitha nakweyiphi na imeko. Abayi kuba nakho ukuhlawulisa imali ephezulu kuba imigaqo yangoku iya kwaphulwa.
Olunye uphawu olwahlula idiphozithi kwi-bond kukuba eyokuqala ayifanele zisiwe kwiqumrhu elifanelekileyo loLuntu oluZimeleyo. Kodwa ngokuchaseneyo, iya kuhlala elugcinweni lomniniyo. Lo ngumahluko ocashileyo ekufuneka uthathelwe ingqalelo ukuze yonke inkqubo iqhubeke kakuhle. Kwimeko nayiphi na into, akuqhelekanga kakhulu ngeli xesha ukuba abaninimzi bacele idiphozithi. Kwinkoliso yemisebenzi, bathambekele ekukhetheni idiphozithi njengokuhamba ngokukhululekileyo kwaye kuyaqondakala kuwo omabini amacandelo enkqubo yerenti yendlu.
Le yenye yemiba eya kulindeleka kakhulu kuba inendlela eyahlukileyo kunaleyo yediphozithi. Kule meko ithile, ibuyiswa ekupheleni kobudlelwane. Kodwa okoko nje kungekho matyala angekahlawulwa kwicala lomhlali. Kwaye nokophula ikhontrakthi kwenziwe. Njengokuba kungabikho monakalo okanye izehlo phantsi, ezibangelwa kukusetyenziswa gwenxa kwayo. Ukuba yonke into yenziwa ngokuchanekileyo, isixa sedipozithi kufuneka sibuyiselwe kwiintsuku ezimbalwa emva kokuphela kwesivumelwano sokurenta.
Ngale nkcazo ukusukela ngoku ukuya phambili uyakucacisa ngakumbi ukuba yeyiphi enye okanye enye into. Ukuze ngale ndlela, akukho zimanga zokugqibela Oko kunokubangela enye ingxaki kwezi ntlawulo kwirenti yendlu. Into eqondakalayo xa la magama abhalwe kwisivumelwano phakathi kwamaqela omabini kwinkqubo yokuhanjiswa kwezindlu engacacanga.
Kwaye kuyo nayiphi na imeko, banokusebenza ukuze nayiphi na ingxaki okanye ungquzulwano phakathi komqeshi kunye nomniniyo luvele. Into ekufuneka ithintelwe ngoxinzelelo lwale migaqo mibini. Ngaphandle kolunye uthotho lokuqwalaselwa kobuchwephesha okuya kuba ngumxholo wolunye unyango kumanqaku ahlukeneyo. Kodwa ngokushwankathela, zizigama ezingafanelekanga ukuba ziphazanyiswe nangayiphi na indlela ukunqanda izehlo kulungelelwaniso lwentlawulo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Rent: Umahluko phakathi kwediphozithi kunye nediphozithi?
Imfazwe phakathi kwe-US ne-Iran inokuya esidlangalaleni
Nguwuphi umzobo wokhuselo lomtyali mali?